Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Hans Airways Signs Contract na Air Logistics Group
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Hans Airways na-akwadebe ịmalite ụgbọ elu ya na-anaghị akwụsị akwụsị na India mgbe e mesịrị na 2021 na ka ọ na-aga n'ihu na mbanye ya ịnweta UK Air Operator Certificate si Civil Aviation Authority.
Hans Airways họpụtara Group Logistics Group dị ka Cargo General Sales na Service Agent.
Airlọ Ọrụ Ngwakọta Ngwaahịa nọ n'ọnọdụ nke ọma ka ọ bụrụ ihu nke ndị ọrụ ibu Hans Airways.
Ndị ahịa ahụ na-enye Hans Airways ahịa ahịa zuru ezu, ahịa, ntinye akwụkwọ n'ịntanetị na nkwado ọrụ ndị ahịa n'ofe netwọkụ ya.
-Gbọ elu ịmalite ụgbọ elu na UK, Ụgbọ elu Hans Airways ahọpụtala ndị ọrụ ụgbọ mmiri dị ka ụgbọ ibu General Sales and Service Agent (GSSA) na ntanetị. Nkwekorita GSSA a ga - ebido na 1 August 2021, na ndị ahịa East Eastlands na - enye Hans Airways ahịa zuru oke, ire ahịa, ntinye akwụkwọ n'ịntanetị na nkwado ndị ahịa gafee netwọkụ ya. Akụkọ a na-agbaso ọsọ ọsọ na ọkwa ọkwa nke ụgbọ elu na nso nso a banyere ndị otu nwere oke mmụta nke ndị otu Board na mbido July.
Nkwekorita GSSA ohuru bu mmepe n’oge dika Hans Airways na akwado iji malite ugbo elu ya n’esepughi aka gaa India mgbe emesiri na 2021 ma dika oganihu n’aga n’iru inweta inweta akwukwo nke ndi UK Air Civil Authority Authority. A na-atụ anya na nkwekọrịta ahụ ga-ebubata ego nnweta bara ụba na ọdụ ụgbọ elu, ọkachasị n'oge ụgbọelu na-arịwanye elu n'ụwa niile.
"Na Logtù Na-arụ Ọrụ ụgbọelu, anyị nwere obi ike na anyị ahọrọla onye ọlụlụ nwere ike ịnye nka n'ahịa, oge nzaghachi ngwa ngwa na ọkwa ọrụ yana ndị obodo na-ebu ibu ga-atụ anya n'aka Hans Airways, "ka Ian Davies, Onye isi na-ahụ maka ndị ọrụ, Hans Airways na-ekwu. "Site na ndị ọrụ nwere ahụmahụ na netwọkụ iji nye mkpuchi dị irè nke ụzọ anyị zubere, Air Logistics Group nọ n'ọnọdụ nke ọma ịbụ ihu ndị otu ngwongwo Hans Airways."
Nkwekọrịta a na Air Logistics Group agaghị abụ naanị nkwekọrịta nke Hans Airways bịanyere aka na ya na ụlọ ọrụ dị arọ na mpaghara ya, ebe onye na-ebu ụgbọ ahụ bu n'obi isoro ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọelu guzobere. “Usoro ahia anyi site na ubochi mbu bu ka anyi na ndi oru na ndi ahia na ndi ozo na-aru oru, dika Air Logistics Group, na-enye anyi ohere iwulite ntọala siri ike ma sie ike choro iji merie. Enwere nkwekọrịta ndị ọzọ na paịpụ ga-egosi na Hans Airways pụtara azụmahịa, ”ka Davies na-agbakwụnye.
"Hans Airways bụ ihu ọhụụ na-atọ ụtọ na ụlọ ọrụ ụgbọ elu ma na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ azụmahịa dị mkpa n'etiti UK na India," ka Stephen Dawkins, Onye isi nchịkwa na Air Logistics Group na-akọwa. "Obi siri anyị ike na ọrụ ọhụụ ha si UK gaa India bụ mbido, na anyị nwere ike iwulite azụmahịa ibu n'ofe netwọkụ Hans Airways ka ọ na-abawanye."